We Fight We Win. -- " More than Media ": ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ပတောင်းတောင်အစီရင်ခံစာထွက်လာပြီ ... မစွံ ဘူး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ပတောင်းတောင်အစီရင်ခံစာထွက်လာပြီ ... မစွံ ဘူး
၀မ်းပေါင်ရပ်မည်မဟုတ်။ လယ်သမားတွေကိုလယ်တွေကို ပြန်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
Who dare to criticize Daw Suu reports?
11 March 2013 at 23:10